တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေသော ဆင်အုပ်စု အနောက်တောင်ဘက်ရှိမြို့တွင် တရစ်ဝဲဝဲနေလျက်ရှိ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် ယွီရှီးမြို့၊ စီကျဲမြို့နယ်တွင် အာရှတောဆင်ရိုင်းအုပ်စုကို ဇွန် ၁၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကူမင်း၊ ဇွန် ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ နာမည်ကျော် လှည့်လည်သွားလာနေသည့်ဆင်အုပ်စုသည် အနောက်မြောက်ပိုင်း ၂.၆ ကီလိုမီတာအထိ ဦးတည်သွားလာခဲ့ပြီး အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ်၊ ယွီရှီးမြို့၊ စီကျဲမြို့နယ်တွင် ဆက်လက်၍ တဝဲဝဲလည်လည် သွားလာလျက်ရှိကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။လွန်ခဲ့သည့် ၁၁ ရက်အကြာက အုပ်စုကွဲသွားသော ဆင်ထီးတစ်ကောင်သည် ယခုအခါ ဆင်အုပ်စုမှ ၁၉.၇ ကီလိုမီတာခန့် အကွာအဝေးသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း၊ သို့သော် ဆင် ၁၅ ကောင်လုံးမှာမှု ဘေးကင်း၍ ကြံ့ခိုင်ကြောင်း ဆင်များ၏ ရွေ့လျားသွာလာမှုကို စောင့်ကြည့်ရေးတာဝန်ရှိသူ ဌာနချုပ်အဆိုအရ သိရသည်။
အဆိုပါ ဆင်များသည် တက်ကြွစွာရွေ့လျားသွားလာလျက်ရှိပြီး ၎င်းတို့အား လမ်းပြရန်နှင့် စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် ဘေးကင်းစွာ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် ခက်ခဲရှုပ်ထွေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဌာနချုပ်အနေဖြင့် ဆင်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှု နစ်နာကြေးနှင့် ဆက်စပ်၍ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ချက်ရှိကာ ၎င်းတို့ရွေ့လျာသွားလာခြင်းကို လမ်းပြရေးအစီအစဉ်များ ထုတ်ပြန်ရန် ကျွမ်းကျင်သူများ စုစည်းခြင်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
အာဏာပိုင်များက တစ်လခန့်အတွင်း ဆင်အုပ်စုကို လိုက်ပါစောင့်ရှောက်ရန် ရဲတပ်ဖွဲ့အား စေလွှတ်ထားခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ဖြတ်သန်းသွားလာရ အဆင်ပြေနိုင်စေရန် လမ်းလွှဲ ပေးခဲ့ခြင်းနှင့် လူနေထူထပ်သောဧရိယာများသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်စေရန် အစားအစာများ အသုံးပြု၍ မျှားခဲ့ခြင်းများလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
အာရှဆင်များသည် တရုတ်နိုင်ငံ၌ နိုင်ငံအဆင့်-အေ (A-level) ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင် ထားရှိပြီး ၎င်းဆင်များကို ယူနန်ပြည်နယ်၌ အများအားဖြင့် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အဆင့်မြင့် ကာကွယ်ထားခြင်းကြောင့် ယင်းပြည်နယ်ရှိ တောရိုင်းဆင်အရေအတွက်မှာ ၃၀၀ ခန့် တိုးလာခဲ့ပြီး ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက ၁၉၃ ကောင်ရှိရာမှ မြင့်တက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (Xinhua)
#China, #Elephant, #Migrating, #Kunming, #Xinhua, #Myanmar, #XinhuaMyanmar, #တရုတ်, #ဆင်, #ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ, #ကူမင်း, #ဆင်ဟွာ
China’s migrating elephant herd lingers in southwest township
KUNMING, June 17 (Xinhua) — China’s famous herd of wandering elephants has headed 2.6 km northwest and continued to linger in Shijie Township in the city of Yuxi, southwest China’s Yunnan Province, authorities said.
The animals have been actively moving, complicating the efforts to guide and monitor them and take safety precautions.The headquarters have done studies related to the compensation of losses caused by the elephants and have continued to organize experts to work out plans to guide their migration.
Photo : Aerial photo taken on June 14, 2021 showsaherd of wild Asian elephants in Shijie Township of Yimen County, Yuxi City, southwest China’s Yunnan Province. China’s famous herd of wandering elephants continued to linger in Shijie Township, authorities said.(Xinhua)